बैद्य र विप्लवलाई बर्षमान पुनको आव्हान : एमालेसंग भन्दा पहिले एकता गरौँ – Nepal News
बैद्य र विप्लवलाई बर्षमान पुनको आव्हान : एमालेसंग भन्दा पहिले एकता गरौँ
काठमाडौं, जेठ २ । अहिले नेकपा एमाले र माअाेवादी केन्दंबीच एकताकाे प्रक्रिया चलिरहेकाे छ । तर माअाेवादी केन्द्रमा बैद्य र विप्लवलाई पनि संगै लिएर जानुपर्ने धानर पनि छ । यहि बिषयमा माअाेवादि नेता बर्षमान पुनस‌ंग गरिएकाे कुराकानी ।
कहिले एकता माग गर्छ देशले, कहिले अलग्याउँछ परिस्थितिले। परिस्थिति परिवर्तन हुँदा मान्छेका सोचहरु पनि परिवर्तन हुन्छ। कुनै दिन विप्लवजी, किरणजीहरु पनि हामी सँगै आउन सक्नु हुन्छ, परिस्थितिले त्यो भन्छ।
हैन, हाम्रो संविधानले संगठन गर्न, आन्दोलन गर्न, आफ्ना एजेन्डा शान्तिपूर्ण रुपमा भन्न कहिँपनि रोक लगाएको छैन। तर त्योभन्दा पर गएर एउटा सीमा नाघ्यो भने राज्यका निकायहरु छन्, तिनले काम गर्छन्। म बसौं या भोलि विप्लव नै यहाँ बसे पनि। त्यसैले त्यसलाई हामीले सहज रुपमा लिनुपर्छ। अहिले नै हामी उहाँहरुलाई दमन गरौं सिध्याउँ भन्नेमा छैनौं। उहाँहरुले हामीलाई दुनियाँ तथानाम गाली गर्ने, आरोप लाउने गर्नुभएको छ, त्यो कुनै पनि हिसाबले पुष्टि हुँदैन। उहाँहरुले पनि इतिहासको जवाफदेही बन्नुपर्छ। अहिले आफ्नो सरकार हुँदा पनि बल प्रयोग गर्छु भन्ने भयो भने त्यो अर्घेल्याइँ हुन्छ।
हो अहिले उहाँहरु हामीलाई अलि टाढाको देख्नु हुन्छ, अरुलाई मित्र देख्नुहुन्छ। तर त्यो गल्ती हो। हामी नै नजिक हो एजेन्डाको हिसाबले। सोचको हिसाबले हामी नै नजिक हो। कुनै पनि बेला उहाँहरुले आफूलाई करेक्सन गर्नुहुन्छ। गर्नुपर्छ।
उहाँहरुले लिनु भएको बाटो त्यस अर्थमा अवैज्ञानिक छ। बसौं न त आफूसँगै काम गरेका सँगै हिंडेका साथीहरुसँग। शान्तिपूर्ण रुपले एउटा टेवुलमा बसेर सम्बोधन गर्न सकिने विषयमा यति ठूलो खैरो खनाखन, लडाईं, भिडाईं किन गर्ने ? यो प्रश्न विप्लवजीलाई हो। उहाँले पनि जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ इतिहासलाई।
रामबहादुर थापा वादलजी, देव गुरुङजी, पम्फाजीहरुसँग निक्कै तिक्तता जस्तो थियो। तर आज हामी एकै ठाउँ, एउटै क्याबिनेट, एउटै संसद र पार्टीमा छौं। त्यसैले मान्छेलाई गतिमा, वस्तुलाई परिवर्तनमा रुपान्तरणमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ।
यो हो भनेदेखि राज्यले त्यहि अनुसार पोजिसन बनाउँछ। हैन भने उहाँका कार्यकर्ताहरु अपराधिक गतिविधिका नाममा जेल जान्छन्।
उहाँले संरक्षण गर्न सक्नुहुन्न। राजनीतिक आन्दोलन हो भने त्यही अनुसार हेरिन्छ। तर बिनाघोषणा मान्छे मार्‍यो, तोडफोड गर्‍यो भने के हुन्छ? कानुन अनुसार त्यहि गर्ने हो।